ကျောင်းများအဘို့န်ဆောင်မှုများ | အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ - မေတ္တာသည်လိင်နှင့်အင်တာနက်
ရှေ့ဆောင်လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးပညာရေးပရဟိတလုပ်ငန်းအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ PSHE / SRE သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အကြားရှိကျောင်းသားများအတွက်အပြန်အလှန်သင်ခန်းစာယူရန်ကလေးများနှင့်လူငယ်များအပေါ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သက်ရောက်မှုများအကြောင်းနောက်ဆုံးသက်သေအထောက်အထားများကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့အွန်လိုင်းပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလမ်းညွှန်ရန်ကျောင်းသားများအတွက်အသက်အရွယ်နှင့်သင့်လျော်သောပစ္စည်းများကိုပေးသည်။ အင်တာနက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများအပေါ်အရက်သောက်ခြင်း၏ကျန်းမာရေး၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်ဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုသတိပြုမိခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ကျော့ကွင်းထဲမကျရောက်နိုင်ပါကအကူအညီတောင်းနိုင်သည်။ မိဘများအနေဖြင့်ဤခက်ခဲသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်အိမ်တွင်သူတို့၏ကလေးများနှင့်စကားပြောဆိုရန်မိဘများကိုကျွန်ုပ်တို့အားအပ်နှင်းထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အင်တာဗျူးများသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသောပြန်လည်ထူထောင်သူများနှင့်သင်ခန်းစာများကိုပိုမိုမှန်ကန်စေသည်။ မိဘများနှင့်ဆရာများအတွက်အထောက်အကူပြုကိရိယာများ၊ ထိုပစ္စည်းများသည်ယုံကြည်ခြင်းကိုအခြေခံသည့်ကျောင်းများအတွက်လည်းသင့်တော်သည်။
"မာရိညစ်ညမ်း၏ခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာငါတို့ကောင်လေးတွေတစ်ထိပ်တန်းဟောပြောချက်ပေးခဲ့တယ်: ကသူတို့ဘဝအသက်တာ၌အသိပေးရွေးချယ်မှုစေနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သည့်အသိပညာနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေတပ်ဆင်ရန်ကူညီပေးနေ, မျှမျှတတ Non-စျကွောစီရငျနှင့်အလွန်အမင်းသိကောင်းစရာများခဲ့ပါတယ်။ "
Stefan ဂျေ Hargreaves, နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၏တာဝန်ခံ, Tonbridge ကျောင်း, Tonbridge အတွက်မာစတာ
Liz Langley, ကိုယ်ပိုင်နှင့်လူမှုရေးပညာရေးဌာနမှူး, ဒေါ်လာစျေးအကယ်ဒမီ
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းယနေ့ကလေးများအပေါ်ကျန်းမာရေး, အပြုအမူများနှင့်ဆည်းအပေါ်သက်ရောက်မှုတစ်ခုအကွာအဝေးရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအက်ဥပဒေ 2017 အတွက်အသက်စိစစ်အတည်ပြုအပေါ်ဗြိတိန်ဥပဒေပြု 2019 ၏အဆုံးန်းကျင်အင်အားစုသို့လာရန်မျှော်လင့်ထားကြောင်းလည်းသိစေခြင်းငှါ။ အစိုးရသေးတစ်ခုအတိအကျရက်စွဲကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမရှိသေးပေ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုကပိုခက်ကလေးများကဤပစ္စည်းကိုရယူဘို့လုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကပြီးသားမိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများဖြစ်လာကြသူအချို့သားသမီးတို့အဘို့အခြို့သောစိတ်ကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ, စိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်။ သငျသညျသငျ့ကြောငျး၌ဤတစ်အန္တရာယ်လည်းမရှိစဉ်းစားပါလျှင်, ဖြစ်ကောင်းငါတို့သည်သင်တို့ကူညီနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အသံကသင်ကြားနည်းအခြေခံမူများနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ် neuroscience နှင့်လူမှုရေးသိပ္ပံသုတေသနသုံးပြီးလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးဟာပညာရေးပရဟိတဖြစ်ကြသည်။ ပညာရှင်များအဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအထွေထွေ Practitioner ၏တော်ဝင်ကောလိပ်တို့ကအသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ကျနော်တို့ PSHE သို့မဟုတ်နိုင်ငံသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် 12 နှစ်အသက်အရွယ် 18 ကနေကျောင်းသားများအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအန္တရာယ်များအပေါ်တပြင်လုံးကိုတစ်နှစ်အစည်းအဝေးများကယ်နှုတ်တော်မူ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချဉ်းကပ်မှုကျောင်းသားသူတို့ကိုဝေဖန်စဉ်းစားတွေးခေါ်ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ခန်းကိုကူညီခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်ခြင်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အဘို့သက်သေသာဓကများကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့သည်လည်းအိမ်မှာသူတို့သားသမီးတွေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်မှမိဘများလုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အသုံးဝင်သောအရင်းအမြစ်တွေကို signposting ။ ကျနော်တို့မကြာခဏဒီဘာသာရပ်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ဘီဘီစီတီဗီနှင့်ရေဒီယိုနှင့်အမျိုးသားရေးစာနယ်ဇင်းဖိတ်ကြားထားပါသည်။
အဆိုပါဆုကြေး Foundation မှသင်ခန်းစာများနှင့်ဆွေးနွေးပွဲအမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းပြသနေသည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးမှုများအသက်အုပ်စုတွင် fit လိုက်. နေကြသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုပါ။ ဆရာ, ဆရာမသုံးစွဲဖို့အတှကျသငျခနျးစာမြားအစီအစဉ်များ၏ပစ်လွှတ်လာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။
ကျောင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများသည်မစ္စမာရီပါ၊ ရှေ့နေ၊ ဒေါက်တာ Darryl Mead နှင့်မစ္စစ်ဆူဇီဘရောင်းတို့ဖြစ်သည်။ မစ္စရှပ်သည်စိတ်ပညာ၌နောက်ခံရှိပြီးစကော့တလန်နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်ရှိရှေ့နေများဌာန၏အသင်းဝင်အဖြစ်ဥပဒေကျင့်သုံးသည်။ သူသည် Cambridge တက္ကသိုလ်မှနည်းပြဆရာအဖြစ် ၈ နှစ်ကြာအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန်အထောက်အကူပြုသည့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Dr. Mead သည်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပြီးစကော့တလန်အစိုးရ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ချန်ပီယံတစ်ယောက်အနေဖြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိစကော့တလန်အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်၏လက်ထောက်အကြီးအကဲဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသည့်ဆရာလည်းဖြစ်သည်။ Suzi Brown သည် PSHE ကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ကျောင်းများတွင် (၇) နှစ်ကြာသင်ကြားခဲ့သည့်ဆရာဖြစ်ပြီး Hopfordshire ရှိ Bishop's Stortford College တွင်လက်ထောက်အိမ်ရှင်မဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စကော့တလန်အစိုးရ၏အားနည်းအုပ်စုများကိုကာကွယ်ရန်အစီအစဉ်တွင်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပြီးကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသင်တန်းကိုပြီးဆုံးခဲ့သည်။
သငျသညျသငျ့ကြောငျးအတှကျကြှနျုပျတို့၏န်ဆောင်မှုများထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုပါလျှင်မှာ, မာရိရှပ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် mary@rewardfoundation.org သို့မဟုတ် 07717 437 727 မှာတယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့တစ်ခုတည်းနှင့်ရောထွေးနှစ်ဦးစလုံးကျားအုပ်စုများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ပစ္စည်းများမတူကွဲပြားမှု-friendly ဖြစ်တယ်။ အားလုံးဆွေးနွေးပွဲနှင့်သင်ခန်းစာများကိုမေးခွန်းများကိုအချိန်ထွက်ခွာသင့်ရဲ့အချိန်ဇယားနှင့်အတူ fit မှရှည်လျားသော 40-60 မိနစ်နိုင်ပါတယ်။
ပြန်လည်ကောင်းမွန်ကြသူလူငယ်တစ် porn စွဲနှင့်အတူကဗီဒီယိုအင်တာဗျူး
ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတန်ဖိုးပေးထားကြသည်နားလည် - ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏တန်ဖိုးသည်အခြားအရာအားလုံးအထက်ဖြစ်ပါသည်
ဒါကြောင့် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အပါအဝင်) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ္တဝါဖြစ်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာလေ့လာစူးစမ်း
လိင်နှင့်သဘောတူညီမှု - လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီခကျြနှငျ့ ပတျသကျ. အကျင့်တရားကိုသိ
မိဘ Talk ကို:
ကနျြးမာရေးအပေါ်ညစ်ညမ်း၏ compulsive အသုံးပြုမှုသက်ရောက်မှုဆည်းဆက်ဆံရေးနှငျ့မှုခငျး
စျေးနှုန်းများ: ဆွေးနွေးပွဲ£ 500 ပေါင်းခရီးသွားကုန်ကျစရိတ်သည်။
S2 နှင့် S4: sexting: ကျန်းမာရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များ
အဘယ်ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက် Bing ကနေ overstimulation အားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်
sexting ပြစ်မှုများဖြင့်တရားစွဲဆိုမြီးကောင်ပေါက်နှင့် ပတ်သက်. ဥပဒေရေးရာအမှုလေ့လာမှုများ
ပြန်လည်ကောင်းမွန်ကြသူလူငယ်တစ် porn စွဲဖြင့် Video အင်တာဗျူးများ
S5 / 6: စမ်းသပ်အပေါ်ညစ်ညမ်း
ဆည်းနဲ့ productivity အပေါ်သက်ရောက်မှုများ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလုပ်ငန်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို 'အာရုံစိုက်စီးပွားရေး' ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဝေဖန်ခြင်း
24 နာရီ ဆိတ်ကွယ်ရာ2အစည်းအဝေးများ c.7 အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ် detox ရက်ပေါင်း: အဆိုပါစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအားလုံးအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုဖုံးလွှမ်း
အပိုင်း ၁ တွင်“ ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ဒီဇိုင်း”၊ ချက်ချင်းအလိုဆန္ဒပြည့်ဝမှုနှင့်ချုပ်တည်းခြင်းတို့နှင့်ပတ်သက်သောကန ဦး ဆွေးနွေးခြင်း၊ အဆိုပါ detox လုပ်နေတာအပေါ်အကြံပေးချက်များ
အပိုင်း ၂၊ ကြားဖြတ်ရက်သတ္တပတ်အတွင်းဤ ၂၄ နာရီ Detox အားစမ်းသပ်ရာ၌သူတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရသောအရာများအပေါ်အကျဉ်းချုံးဖော်ပြသည်
ဒစ်ဂျစ်တယ် detox / နှင့်အတူဖန်သားပြင်စာရှောငျခွငျးအကွောငျးကိုသတင်းပုံပြင်များကိုကြည့်ပါ S4 နှင့် S6 Edinburgh ကျောင်းတွင်ကျောင်းသား။
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကနေအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုအသိပညာပေး (သာ P7):
အကြှနျုပျ၏ပလတ်စတစ်ဦးနှောက်: အဟောင်းနှင့်အသစ်ဦးနှောက်၏အလုပ်နားလည် (လိုသောနဲ့စဉ်းစား)
အပိုင်း 1 အင်တာနက်ကိုအခြားသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိပ်ပျော်လုယူကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူချိတ်ဆက်လိုသောကျွန်တော်တို့ကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုကနဦးဆွေးနွေးမှုလည်းပါဝင်သည်; အဆိုပါ detox လုပ်ခြင်းအားအပေါ်အကြံပေးချက်များ
အပိုင်း ၂ ဆွေးနွေးမှုတွင်သူတို့ ၂၄ နာရီ Detox စမ်းသပ်မှုကိုကြားရက်သတ္တပတ်အတွင်းသူတို့ကြိုးစားခဲ့ခြင်းအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း
ပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဘို့ပျက်ဆီးနှင့်မဟာဗျူဟာန်းကျင်ကနောက်ဆုံးသက်သေအထောက်အထားများနှင့် ပတ်သက်. မိဘများပြောဆိုပါ။ ဤသည်အိမ်တွင်ဆွေးနွေးမှုများများအတွက်ရေခဲကိုချိုးဖျက်ကူညီပေးသည်
ကျေးဇူးပြု ထိတှေ့ အခမဲ့ရေးသားထားသောကိုးကားဘို့ကျွန်တော်တို့ကို။ Reward Foundation သည်သင်လိုအပ်သောအရာများကိုဖြည့်ဆည်းရန်စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းသင်ခန်းစာများကိုလည်းပေးနိုင်သည်။
စျေးနှုန်းများ VAT ကိုအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်စကော့တလန်နှင့်ပစ္စည်းများဗဟိုခါးပတ်အတွင်းအားလုံးခရီးသွားလာပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။